Njengoba bekulindelwe, iMicrosoft isivele iqale ukwenza ngokuvuza kwekhodi ye-XP | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sabelane lapha kubhulogi izindaba ze-fukuguqulwa kwekhodi yomthombo yezinhlelo ezahlukahlukene zokusebenza zeWindows, okuheha kakhulu i-XP ku-g nezinye iziteshi ku-4chan (uma ufuna ukwazi kabanzi ngenothi ongakwazi hlola isixhumanisi esilandelayo.)
Ngokusobala, kubaduni babehambise ifayili ngasese iminyaka. Ubuqiniso bayo buqinisekiswe ngumsebenzisi ekuqaleni kuka-Okthoba ngemuva kokuqalisa ukusebenza kwezinhlelo zokusebenza ngemuva kokuhlanganiswa.
Ngalokhu kwafika umdlandla wabaningi, ngoba kubathandi beLinux neMac, lokhu kungasho ukuthuthuka okuhle maqondana nokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza okukuvumela ukuthi usebenzise izinhlelo zeWindows kusistimu yakho oyithandayo.
Kepha akuyona yonke into elula njengoba ibonakala, ngoba ezinsukwini ezimbalwa leyo khodi ye IMicrosoft ebesevele iqale ukuphoqelela amalungelo ayo wobunikazi ubuhlakani ne-Google ngokubangela ukususwa kokuqukethwe kwamavidiyo ahlobene kungxenyekazi yayo yokwabelana ngamavidiyo - i-YouTube
Ifemu yeRemond iyaqhubeka nomsebenzi wokuhlanza futhi kulokhu nenkonzo yayo yokubamba.
"Le khodi okukhulunywa ngayo ivela ekuvuza kwesistimu yokusebenza kweWindows XP," kusho iMicrosoft, engeza ithimba ukuqinisekisa ubuqiniso bale mithombo esivele iholele ekusebenzeni kwezinhlelo zokusebenza. Yingakho ithimba lokuphendula izehlakalo zokuphepha zeMicrosoft likhiphe isaziso se-copyright lapho, phakathi kwezinye izinto:
Futhi yilokho Abasebenzi beMicrosoft bakhombe lapho kunenkinga khona futhi ekwenzeni isitatimende sokuthi iMicrosoft ayikugunyazi ukusetshenziswa kwalowo msebenzi ngabantu besithathu, inqobo nje uma kunesitatimende, ngaphansi kwesigwebo sesifungo samanga, sokuthi imininingwane ekulesi saziso inembile futhi ingeyomnikazi we-copyright iMicrosoft.
Indawo yokugcina izinto lapho izinkinga zenziwa khona, ngaphambili ibifinyeleleka ngekheli https://github.com/shaswata56/WindowsXP, engasatholakali selokhu inqolobane imisiwe futhi singakubheka lokhu lapho sizama ukufinyelela kusixhumanisi.
Embuzweni, leli khosombe beliqukethe ifayela eliku-inthanethi lapho amakhodi womthombo angatholakala khona Ezinguqulweni zangaphambilini zezinhlelo zokusebenza ze-Microsoft: Windows 2000, Windows Embedded (CE 3, CE 4, CE 5, CE 7), Windows NT (3.5 no 4), Windows XP, Windows Server 2003, MS DOS (3.30 and 6).
Futhi kufakwe amakhodi womthombo okusolwa abanye bawo Windows 10 izinto.
Amafayela amaningi adalulwe ngalengobo yomlando ayedalulwe eminyakeni edlule.
Isibonelo, ikhodi yomthombo yezinye Windows 10 izingxenye zavezwa online ku-2017.
Ehlobene ne-Xbox ne-Windows NT ekuqaleni konyaka. Okunye, ukuvuza okudala kakhulu kubuyela ezingxoxweni ezisohlwini lwama-imeyili kanye nezithangami ezisukela ekuqaleni konyaka ka-2010. Ngakho-ke ukuvuza kwamanje ukuhlanganiswa.
Kodwa-ke, iMicrosoft inikeza ukufinyeleleka kwekhodi yomthombo yezinhlelo zayo zokusebenza kohulumeni ukuze kuhlolwe ukuphepha kanye namaqembu ocwaningo lwezifundo ocwaningweni lwesayensi.
Kukule ndawo lapho lokhu kuvuza kungavela khona. Ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, isoftware eningi ifana namabhokisi amnyama - uyazi ukuthi yenzani nokuthi ikwenza kanjani, kepha imininingwane ngokuvamile ifihliwe. Isoftware yomthombo ovulekile yehlukile kulo mthetho, kepha iMicrosoft isebhizinisini lesoftware ephathelene noma evaliwe.
Kunezizathu eziningi kungani ikhodi yomthombo yalezi zinhlelo ezisebenzayo ingaheha.
Okokuqala, ukuba nazo kuzovumela wonke umuntu ukuthi azenzele ezahlukile zalezi zinhlelo ezisebenzayo.
Futhi, ivumela abantu ukuthi baqonde ukuthi lezi zinhlelo zisebenza kanjani. Futhi ingasetshenziselwa izizathu ezinhle ezifana: nokwenza isoftware yokulingisa yeWindows kwi-Mac, ngokwesibonelo.
Noma kunjalo, lolu lwazi lungasetshenziselwa izinhloso ezinonya. Eqinisweni, uma lezi zinguquko ezindala zezinhlelo zokusebenza zingasasetshenziswa kakhulu, iqiniso ukuthi bangabelana ngamakhodi amakhulu wekhodi nge Windows 10.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Njengoba bekulindelwe, iMicrosoft isivele iqale ukwenza ngokuvuza kwekhodi ye-XP
Kunengqondo ukuthola ikhodi njengamanje ngo-2020, ngaphandle kokuthi isebenzise ku-PS yokuqala, haha
I-GeoFS: Umdlalo wokulingisa wasemoyeni ovela kusiphequluli usebenzisa i-Cesium